araka ny tatitra navoakan’ny fikambanana tsy miankina “Terre des Hommes sy ny Centre de recherche sur les multinationals”. Misy amin’ireo zaza ireo no mbola vao 5 taona monja ary tombanana ho zaza tsy ampy taona avokoa ny antsasak’ireo mpitrandraka eladrano eto amintsika. Toeram-pitrandrahana miisa 13 tany Atsimo atsinanan’ny Nosy no nanatanterahana an’ity fanadihadiana ity. Misy amin’ireo ankizy ireo no asaina mandavaka lava-drano sy tonelina, ny sasany kosa, asaina mifantina an’ireo eladrano azo amidy. I Madagasikara moa no firenena fahatelo eran-tany amin’ny fitrandrahana an’ity karazana mineraly ity, fa voalohany kosa amin’ny fanondranana azy. Ampiasaina amin’ny karazan-javatra maro ny eladrano, toy ny fanamboarana finday na ihany koa amin’ny fitaterana, toy ny fiara sy ny lamasinina. Ny fitrandrahana azy anefa dia mitarika voka-dratsy ara-pahasalamana maro. Araka ilay tatitra navoakan’ny Terre des Hommes sy ny Centre de recherche sur les multinationales dia maro amin’ireo ankizy tsy ampy taona no marary lamosina, marary an-doha vokatry ny fitaninana andro sy ny tsy fahampian-drano, tsy maintsy maratra isan’andro, mikohaka sy marary tratra noho ny vovoka ateraky ny eladrano… Miteraka resa-be maneran-tany mihitsy ankehitriny ity fampiasana zaza tsy ampy taona mitrandraka eladrano eto Madagasikara ity. Anisan’ny tratran’ny fanadihadiana lalina izao ny orinasa atao hoe : CRRC, orinasa sinoa mpamokatra lamasinina, matanjaka indrindra eran-tany. Voalaza fa aty Madagasikara izy ireo no maka ny eladrano ampiasainy hanamboarana lamasinina, saingy manelingelina an’ireo firenena mpanjifany izany, noho ity voka-panadihadiana ity. Efa betsaka ireo firenena matanjaka no mangataka fanazavana amin’ny CRRC amin’izao, vokatr’izany.